Bukhoma Pirate Bay - Landa umculo, ama-movie, mahhala!
Izindlela Ezinhle Zokwenza Ukuhlangenwe nakho Kwakho ePirate Bay [Kuvuselelwe ngo-Ephreli 2019]
Isikhathi singaba okuhlobene, kodwa futhi kuyancipha. Kunezinsuku eziningi kakhulu okufanele sichithe kulo mhlaba wethu. Ukulinda isifufula esijubane akufanele kube yindlela esisebenzisa ngayo lezi zikhathi.
IPirate Bay inedumela lokunikeza ukufinyelela okusheshayo nokufanele kokuqukethwe okufunayo. Le ndaba yingoba abantu abaningi baneqhaza ekwenziweni kokuhlwanyelwa futhi kulayishwe ngokungaguquki, kusiza ukudala umphakathi wabasebenzisi abanomqondo ofanayo osekelanayo.
Ungathola okuningi ngePirate Bay lapha uma ungayazi ipulatifomu: https://www.thepiratebay.wiki.
Lapho uhlangabezana nesifufula esihamba kancane, kungahle kube ngenxa yokuntuleka kwabahlwanyeli noma okuqukethwe ifayela elimpofu. Ngomsebenzisi ojwayelekile, impikiswano ayikho ku-Pirate Bay. Kungenxa yokusetha abanakho ekhaya.
Izindlela ezilula Zokuthuthukisa Ijubane Lakho Lokulanda
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukulanda nokulayisha isivinini sokuthi i-ISP yakho icaphuna wena ngesikhathi sokuthengisa kwabo kubonisa inani eliphezulu ongalifinyelela. Izindawo eziningi azivamile ukusondela kula mazinga akhangisiwe. Njengomthetho ojwayelekile wesithupha, kuwumqondo omuhle uku-oda okushesha cishe ngama-50% kunalokho ocabanga ukuthi kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi ungaba nesipiliyoni esihle kakhulu.
Lokho kusho ukuthi uma ucabanga ukuthi ama-Mbps angama-50 ashesha ngokwanele ukufeza izidingo zakho zejubane le-Intanethi, kufanele ukhethe amaMbps angama-75 esikhundleni salokho.
Kubalulekile futhi ukukhumbula ukuthi ama-MBps namaMbps angokuqokwa okuhlukile. Uma une-1.44 MBps, lokho kuyalingana cishe ne-11.5 Mbps. Ukwenza i-“B” kusho ukuthi usuka kuma-megabits uye ku-megabytes umzuzwana.
Uma wenza ijubane lakho libe lihle, ke Nazi ezinye izindlela ezengeziwe zokuthuthukisa ulwazi lwakho ku-The Pirate Bay.
1. Hlola Umzila Wakho Nemodemu
Uma uhlangabezana nokuxhumeka kwe-inthanethi okuhamba kancane, imodemu yakho kungenzeka isolwe. Yini into yokuqala oyenzayo lapho uhlangabezana nokudonswa kwedatha? Uhlela kabusha imodemu. Uma lokho kungasebenzi, bese ukhipha i-router, bese uyixhuma futhi. Ungadinga ukuthuthukisa la mathuluzi uma uhlangabezana nokuxhumeka kaningi ngenkathi uhambisa amanzi.
2. Skena uhlelo lwakho
Uyazi ukuthi wagcina nini ukuskena ukuthola amagciwane ohlelweni lwakho? Ama-malware, amabutho, nezinye izinto ezingafuneki angaqeda izinsiza zekhompyutha yakho. Lapho lokho kwenzeka, ijubane lakho liyahlupheka ngenxa yalokho. Kungasiza ukwenza scan nsuku zonke, ikakhulukazi uma ulanda izifufula njalo.
3. Yehlisa ukuphazamiseka ohlelweni lwakho.
Kukhona umkhiqizo obizwa ngeWebroot osebenza kwiMac®. Uma kusebenza, ke kudala ukuphazamiseka ohlelweni ukuze ungasakwazi ukusebenzisa imisebenzi yokubizela. Kufanele uvale isoftware ukuze uvumele iwindi lokuvula izwi ukuba liqhume. Kunezinhlelo eziningi namapulatifomu angadala ukuphazamiseka ngenqubo yokulanda noma isivinini se-Intanethi.
4. Ngabe usaqhubeka nokuhlunga?
Uma ukuxhumeka kwe-DSL esikhundleni se-Broadband ye-Intanethi yakho, ikhwalithi yokuhlunga kwakho kungaba yinkinga. Ukuphazamiseka okwenzeka kulayini kungadala ukuwa okungazelelwe, kukuphoqe ukuthi uphinde uxhume. Enye inkinga ekulesi simo esithile okufanele icatshangelwe ukuba khona kocingo olungenantambo. Zama ukwenza isivivinyo sokuhlukanisa ukuze ubone ukuthi ngabe iyunithi ethile idala yini izinkinga obhekene nazo ngePirate Bay.
# 5. Une-block ye-ISP esizeni.
Amanye ama-ISPs azovimba lonke ipulatifomu lapho uzama ukufinyelela i-Pirate Bay. Abanye basebenzela ukuvimba okuqukethwe abasola ukuthi kunamalungelo obunikazi. Uma uhlangabezana nalesi simo, khona-ke kungasiza ukuzama enye yezindawo zesibuko esisebenzayo: https://tpb.wiki/.
# 6. Dala ukuxhumana okuqondile.
Uma usebenza ngaphandle kwentambo lapho ufinyelela i-Pirate Bay, khona-ke ijubane lakho lokuxhumeka liyohamba kancane. Uzofuna ukuzama ukuxhumeka ngqo ku-modem esikhundleni uma unentambo ende ngokwanele ukwamukela le nketho. Bese uzama ukufinyelela isibuko esisebenza kahle kakhulu se-The Pirate Bay ngonyaka ka-2019 ukuze ubone ukuthi ngabe kukhona yini osebenza khona ngendaba ye-ISP engaba khona: iPirate Bay.
Kungenzeka kube nezinkinga ezithile zokuphazanyiswa futhi ongazicabanga. Ezinye izinhlobo zamabhokisi wethelevishini amadala zingaphazamisa i-Intanethi yakho, noma ngabe azifinyeleli izinsiza. Ubude noma ubudala bezintambo zakho bungaba yinkinga futhi. Kungahle kube nokuphazamiseka kwangaphandle namanye amadivayisi akho kagesi.
Lapho usuxazulula izingqinamba ezingaba khona ezivimba isivinini sakho sokulanda ngokushesha, uzokwazi ukuthokozela zonke izinzuzo zezifufula ezinikezwa yiPirate Bay nsuku zonke.